Casillas oo soo dhaweeyay inuu tartan lagalo De Gea koobka euro 2016 – Gool FM
Liibaan Fantastic June 7, 2016
(Madrid) 07 Juunyo 2016 Goolhayaha xulka qaranka Spain ee Iker Casillas ayaa soo dhaweeyay in booska goolhaye ee xulka qaranka uu kula tartamo goolhayaha Man United David De Gea.
De Gea oo 25 jir ah ayaa qaab ciyaareed fiican ku soo bandhigay kooxdiisa Man united sanadihii u danbeeyay tababare Del Bosque ayaana u arka inuu yahay badalka Iker Casillas ee xulka qaranka.
Casillas ayaa sheegay in De Gea uusan ahayn kaliya goolhayaha mustaqbalka balse uu yahay goolhaye kula tartamaya sidii uu ugu soo bilaaban lahaa koobka qaramada qaarada yurub ee sanadkaan lagu qaban doono France.
“De Gea ma ahan kaliya goolhayaha mustaqbalka ee sidoo kale waa goolhaye aad iila tartamaya, waxaa muuqata in dhamaan ciyaartoydu ay u diyaarsanyihiin inay safka hore ku soo bilowdaan” ayuu u sheegay idaacada Cadena Cope.
“Waan ku kalsoonahay awoodeena ku aadan inaan caawino xulka qaranka laakiin go’aanku waa mid u laabanaya tababaraha si uu u go’aamiyo shaxda safka hore”.
TOOS u daawo: Spain vs Georgia - LIVE